ဂျပန် ဆူရှီ | Wutyee Food House
« အုန်းနို့ ရနံ့သင်း ပုဇွန်မီးဖုတ်
ထောပတ် ပြောင်းဖူးကင် »
May 27, 2011 by chowutyee
ဒီဂျပန် ဆူရှီလေးကတော့ ခုခေတ် လူတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဟင်းလျာလေး တမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျပန်ဆူရှီ ဟင်းပိုင်ရှင်က ၀တ်ရည်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀တ်ရည်ရဲ့ အစ်မွှာညီမ ၀တ်မှုံရဲ့ လက်ရာလေးပါ။ ဒါကြောင့် Wutyee Food House မဟုတ်ပဲ Wuthmone Food House လက်ရာလို့ ပြောပါရစေ။ 😀 ဆူရှီလုပ်နည်းလေးကို အရင်ကတည်းက တင်ချင်နေတာကြာပါပြီ။ ၀တ်မှုံ လုပ်ထားတာ တွေ့လို့ ချက်နည်းနဲ့တကွ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှာလကာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
ဆူရှီလိပ်တွင် ထည့်ရမယ့် ပစ္စည်းများ
မုန်လာဥနီ – ၂ခု (အခွံနွာပြီ အချောင်းလေးများ လှီးထားပါ။ ပြီလျှင် ရေနွေးဖျော်ထားပါ)
ဂဏန်းချောင်း – ၄ချောင်း ( အရှည် လှီးထားပါ)
ထောပတ်သီး – တခြမ်း ( အရှည် လှီးပေးပါ)
သခွာသီး – ၁ခု ( အခွံနွှာပြီ အရှည်လေးများ လှီးထားပေးပါ)
ဆယ်မွန်ငါး – ၆ခု
၁။ အရင်ဆုံး ဆူရှီဆန်ကို အရင်စချက်ပါမည်။ ရှမ်းဆန်ကို ရေအေးနှင့် ဆေးပြီ ဇကာဖြင့် ၁နာရီကြာ စစ်ထားပေးပါ။
၂။ ရှမ်းဆန် မြုပ်ရုံ ရေထည့်ပြီ ၁၀မိနစ်ခန့် မီးနည်းနည်းဖြင့် တည်ထားပါ။
၃။ ပြီလျှင် ထမင်းမွှေတဲ့ သစ်သားယောင်းမဖြင့် ခွက်တစ်ခုထဲပြောင်းထည့်ပြီ ရှမ်းဆန်များကို အနည်းငယ် မွှေပေးပါ။
၄။ ပြီမှ ရှာလကာရည်၊ သကြား၊ ဆားတို့ကို လောင်းထည့်ပြီ ဆူရှိဆန်ထဲ နှပ်သွားအောင် အသာအယာ ယောင်းမဖြင့် မွှေပေးပါ။ ပြီနောက်၁၀မိနစ်ကြာအောင် အခန်းအပူအချိန်တွင် ထားထားပေးပါ။
၁။ ဆူရှီစလိပ်ပါမည်။ ဆူရှီလိပ်မည့် ၀ါးယင်းလိပ်ပေါ်သို့ ရေညှိပြားလေး တင်ပေးလိုက်ပါ။
၂။ ပြီမှ ဆူရှီထမင်းများကို ရေညှိပြား ပေါ်သို့ ဖြန့်ပြီတင်လိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် သခွာသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ ဂဏန်းချောင်း၊ ဆယ်မွန်ငါးများကို ဆူရှီပြားအလယ်တွင် အရှည်လိုက် တင်ထားပေးပါ။
၄။ ဆူရှီ စလိပ်ပါမည်။ ဆှူရှီ ၀ါးယင်းလိပ်ဖြင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း လိပ်သွားပေးပါ။
၅။ နောက်ဆုံးမှ ဆူရှီကို ဓားဖြင့် ၈ပိုင်းပိုင်း လိုက်ပါ။
၆။ စချင်စဖွယ် ဆူရှီလေးများကို ဂျပန်ငံပြာရည်ဖြင့်တွဲဖက် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
မှတ်ချက် ။ ။ နောက်တမျိုးအနေနဲ့ ပလပ်စတစ်အကြည်ကို ၀ါးယင်းလိပ်ပေါ် အရင်ခင်းပြီမှ ဆူရှီထမင်းကို တင်ပြီ ရေညှိပြားကို တင်ပါ။ ပြီလျှင် အရင်ချက်နည်းအတိုင်း သခွာသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ ဂဏန်းချောင်း၊ ဆယ်မွန်ငါးများဖြင့် ဆူရှီကို လိပ်သွားပါက အောက်မှ ပုံအတိုင်း ရပါလိမ့်မည်။
Posted in ဂျပန်စတိုင် ချက်ပြုတ်နည်း |9Comments
on May 27, 2011 at 9:57 am | Reply cho hmone
Sushi lay ko arr pay kha par own naw hee 🙂
on May 27, 2011 at 11:08 am | Reply Shane
Like it .. Love it 🙂 .. Nice nice ..
on May 27, 2011 at 3:14 pm | Reply Dare
Tks. I luv Japanese food.
Thank Dare… 😛
on May 28, 2011 at 12:43 am | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
မှုန်ကြီးကလည်း ၀တ်ရည်နဲ့ ညီအစ်မလို့ မပြောရဘူး
😀 Thanksalot ma Chaw..
on June 17, 2011 at 12:16 am | Reply အုန်းနို့ ရနံ့သင်း ပုဇွန်မီးဖုတ်
[…] June 17, 2011 · By panda (No Ratings Yet) Loading … […]